Xeerka Arimaha Sirta ah | Boston School Finder
Arimahaaga shaqsiga ah muhiim ayay nooyihiin.
Waa xeer udagsan Boston School Finder inay xushmayso arimahaaga sirta ah ee laxariira macluumaad kasta oo aan kaasoo aruurino adiga kuna jira webseetkeena, bostonschoolfinder.org, iyo baraha kale ee aan leenahay aana kushaqayno.
Macluumaadka aan soo aruurino
Markaad booqato webseetkeena, adeegyadeena ayaa si ootomaatig ah ukaydin kara maclumaadka uu baxsho barta aad booqanayso. Macluumaadkaan waxaa lootir=xgaliyaa “macluumaad aan qofka lagu aqoonsan karin”, maadaama aysan si shaqsi ah adigga tilmaamn kaaga bixinayn. Waxaa kujiri kara ciwaanka borotokoolka interneetka kumbuyuutarkaaga (IP), nooca iyo naqshada baroowsarkaaga, bogagga aad booqato, iyo macluumaad kale.
Macluumaadka Shaqsiga ah
Waxaan kaacodsan karnaa macluumaad shaqsi ah, sida magacaaga iyo ciwaankaaga emailka. Macluumaadkaan waxaa lootixgaliyaa “macluumaad qofka lagu aqoonsan karo”, maadaama uu adigga si shaqsi ah kuu aqoonsanaayo. Waxaan kaliya kaacodsanaynaa macluumaad shaqsi ah oo laxariira adeegyada aan kusiinayno, waxana kaliya u adeegsanaynaa inaan kusiino ama kuhormarino adeegyadaan.
Sida aan u aruurino macluumaadka
Waxaan macluumaadka ku aruurinaa qaab cadaalad iyo sharci kudhisan, adoo og ogolaanshana aan kabixinaaya. Waxaan sidoo kale kuuso sheegaynaa sababta aan macluumaadka uqaadayno iyo sida aan u adeegsanayno. Waxaad xaq uleedahay inaad diido codsigeena laxariira macluumaadkaan, adoo fahansan inaan awoodi wayn karno inaan kusiino adeegyada laguugu talagalay qaarkood haddii aanaan macluumaadka kaahaynin.
Waxaan adeegsan karnaa iskudarka macluumaadka ku aqoonsanaaya iyo kan aan ku aqoonsanayn si aan ufahano cida ay yihiin dadka barteena booqanaaya, siday u adeegsadaan adeegyadeena, iyo sida aan kor ugu qaadi karno khibradooda laxariirta webseetkeena mustaqbalka. Kuma faafinayno arimaha qaaska ah ee macluumaadkaan meelaha bulshada, laakiin waxaan adeegsan karnaa qaybo xul ah oo qarsoon oo kamid ah macluumaadkaan, tusaale, inaan ku isticmaalno warbixinada webseetka iyo isticmaalka macaamiisha.
Kashaqaynta iyo adeegsiga macluumaadka
Waxaan kaliya kaaqadanaynaa macluumaadka aasaasiga ah sida muhiimka u ah inaan kusiino adeegyada, ama inaan kuhormarino adeegyadeena mustaqbalka. Intaan macluumaadkaan hayno, waan ilaalin doonaa si waafaqsan hanaanada ganacsiga si aan uga dhawrno inay lunto ama laxado, iyo sidoo kale in lagu galo si bilaash fasax ah, lafaafiyo, koobi laga qaato, la adeegsado ama wax laga badelo. Ayadoo taasi jirto, waxaan kugula talinaynaa inuusan jirin qaab isdhaafsiga elegtariiniga ah ama kaydku oo 100% amaan ah, mana balan qaadi karno difaaca macluumaadka oo gabi ahaanba sugan.
Waxaan adeegsanaa “aruuriyaasha” si aan macluumaad kugu saabsan adigga iyo shaqadaada ugasoo arurino qaybaha kaladuwan ee barteena aad gashay. Aruuriye waa qayb yar oo macluumaad ah oo webseetkeenu kukaydiyo kumbuyuutarkaaga, uuna adeegsado markasta oo aad booqato si aan markaas ufahano qaabka aad u isticmaasho barteena aana kusiino mawduucyada laxariira dookhyada aad sida gaarka ah udooratay.
Haddii aadan doonayn inaad aqbasho aruuriyaasha barteena, waa inaad kuxirtaan baroowsarkaaga inuu diido aruuriyaasha barteena, adoo ogsoon in aan awoodi wayn karno inaan kusiino qaar kamid ah adeegyada aad ubaahan tahay anagoon macluumaadkaas hayn. Xeerkaan wuxuu kaliya kahadlayaa adeegsiga xog aruuriyaasha udhaxeeya kumbuyuutarkaaga iyo webseetkeena; kama hadlaayo xog aruurinta ay adeegsadaan qolo saddexaad oo bixiso adeegyo aan ku adeegsano webseetkeena.
Galitaanka qolo saddexaad ay kugasho macluumaadka
Waxaan adeegsan karnaa adeegyada ay baxiyaan qolo saddexaad oon ku isticmaalno barteena iyo shaqada suuqgaynta. Adeegyadan ayaa gali kara macluumaadkeena kaliya ujeedo laxariirta fulinta shaqooyin gaar ah ayagoo anaga wakiil naga ah. Lama wadaagi karno wax macluumaad ah oo si shaqsi ah u aqoonsanaaya macaamiisha oon lawadaagno adeegyadaan adoon si cad ubixin ogolaansho. Uma ogolaano adeegyadaan inay faafiyaan ama adeegsadaan wax kamid ah macluumaadkeena ujeedo kasta ooy u adeegsadaanba.
Waxaan diidi doonaa codsiyada dawlada iyo laamaha sharci fulintu nooga codsadaan macluumaad haddii aan aaminsanahay in codsigu yahay mid aad ubalaaran ama laxariirin ujeedada loo codsaday. Hase yeeshee, waan u ogolaanaynaa haddii aan aaminsanahay in macluumaadka lacodsaday muhiim yahay kuna haboon yahay raacida hanaanka sharciga, si aan udifaacno xaquuqdeena iyo hantideena gaarka ah, si aan udifaacno badqabka bulshada iyo qofkasta, si looga hortago danbi, ama inaan kahortagno waxaan si macquul ah u aaminsanahay inuu yahay sharci daro, sharciyan talaabo laga qaadi karo, ama falkabaxsan dhaqanka wanaagsan.
Haddii kale masiinayno macluumaadkaaga shaqsiga ah qolo sadexaad. Kama kiraynayno ama iibinayno macluumaadkaaga shaqsiga ah suuqleeyda ama qolyo saddexaad.
Webseetkaan si kas ah ama yool ah uma aruuriyo wax macluumaad sharci ah oo caruurtu leeyihiin. Adoo ah waalidka/masuulka ilmaha, fadlan nalasoo xariir haddii aad aaminsantahay in cunugaagu kaqaybgalaayo shaqo laxariirta macluumaadka shaqsiga ah oo kujirta webseetkeena, aadana helin ogaysiiska ama codsiga ogolaanshahaaga. Uma adeegsano macluumaadka xariirka ee aad nasiisay sababo ganacsi ama ujeedooyin xayiisiineed.
Xeerkaan dhanka arimaha shaqsiga ah wuxuu kaliya kahadlayaa kaliya aruurinta iyo haynta macluumaadka ee barta Boston School Finder. Waxaan kaliya lashaqaynaa iskaashato, saamileey iyo qolyo saddexaad oo xeerarkooda arimaha shaqsiga ah ay lamid yihiin kuweena, hase yeeshee maqaadi karno masuuliyada ama eeda ee xeerarkooda arimaha sirta ah ee gaarka ah.
Barteena ayaa kuxirnaan karta baro banaanka ka ah kuwaasoo aanaan anagu maamulin. Fadlan xasuusnoow inaanaan xukumin macluumaadka iyo xeerarka barahaas, aanaana qaadan karin masuuliyada ama eeda xeerarkooda arimaha sirta ah ee ugaarka ah.
Isbadelada lagu sameeyo xeerkaan
Ayadoo masuuliyadeena ah, waxaan wax kabadeli karnaa xeerkaan si aan uraacno dhaqanada hadda jira ee la aqbali karo. Waxaan qaadi doonaa talaabooyin sabab leh si aan ugu sheegno isticmaalayaasha isbadalada kudhaca barteena. Isticmaalkaaga joogtada ah ee bartaan kadib marka wax isbadelo ah kudhacaan xeerkaan waxaa loo arkayaa inay tahay aqbalaad aad aqbashay xeerarkeena ee laxariira kaydka iyo macluumaadka shaqsiga ah.
Xaquuqdaada iyo waajibaadka kusaaran
Maadaama aad tahay isticmaalaheena, waxaad xaq uleedahay in lagugusoo wargaliyo sida loo aruuriyo loona adeegsado macluumaadkaaga. Waxaad xaq uleedahay inaad ogaato nooca macluumaadka ee aan kaaqaadno, iyo sida aan u adeegsano. Waxaad xaq uleedahay inaad saxdo aadna wax kabadasho macluumaad shaqsi oo kasta oo adigga kula xariira, iyo inaad codsato in macluumaadkaan latiro.
Waxaad xaq uleedahay inaad xadido ama diido adeegsigeena macluumaadkaaga, adoo xaq uleh inaad macluumaadkaaga shaqsiga ah waxaad rabto u adeegsato. Waxaaad xaq uleedahay inaad diido macluumaadka kugu saabsan in loo adeegsado go'aanada kusalaysan kaliya shaqo ootomaatig ah.
Waxaad ufasaxan tahay inaad nalasoo xariirto hadaad wax su'aalo ah ama walaacyo ah kaqabto qaabka aan ugu shaqayno macluumaadkaaga iyo kaydkaaga shaqsiga ah.
Xakameeyaha Macluumaadka ee barta Boston School Finder
Madaxa Difaaca Macluumaadka ee Barta Boston School Finder
Xeerkaan wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo 12 Feebaraayo 2019.